Hotline Khabar | News Website आउँदो चुनाव जित्न कांग्रेसलाई १५ प्रतिशत युवाको मत भए पुग्छ: डिला संग्रौला – Hotline Khabar
आउँदो चुनाव जित्न कांग्रेसलाई १५ प्रतिशत युवाको मत भए पुग्छ: डिला संग्रौला
२९ भाद्र, २०७६ मा प्रकाशित
देशमा पञ्चायती शासनको बर्बरता थियो । राजनीतिक दलहरु भूमीगत रुपमै पञ्चायती व्यवस्था ढाल्न प्रेरित थिए । जनतामा पनि पञ्चायती व्यवस्था ठीक नरहको सन्देश दिन राजनीतिक दलहरु सफल भइसकेको अवस्थामा जनताको आंखाँमा छारो हाल्न मात्रै भएपनि तत्कालीन राजा विरेन्द्रले २०३६ सालमा जनमत संग्रह गराए । तर, भोट सुधारिएको पञ्चायतमा गयो ।
देशमा चलिरहेको पञ्चायती व्यवस्था र त्यसलाई ढाल्न भन्दै भएको जनमत संग्रहमा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाएका धेरै युवा विद्यार्थीहरुमध्ये एक हुन नेतृ डिला संग्रौला । जनमत संग्रहको समयमा उनी विद्यार्थी राजनीति गर्थिन ।
०३६ सालको जनमत संग्रहलाई सम्झदै उनी भन्छिन् ‘बहुदलको पक्षमा गानै (गित) गाएर हिँडियो नि !’
कक्षा ९ बाट नै राजनीतिमा लागेकी संग्रौला सानैदेखि आँटीली थिइन् । उनी आफैँ भन्छिन्, ‘महिलामाथि हुने हिंसालाई सहनै सक्दिन थिएँ ।’
उनलाई विद्यार्थी राजनीति गर्दाका केही रोचक र घोचक घटना (क्षणहरु) अहिले पनि महत्वपूर्ण लाग्छन् ।
संग्रौलाका अनुसार एकपटक अनेरास्ववियुले नेविसंघमाथि आक्रमण गर्यो । ‘ग्याङ बटुलेर विद्यालय बन्द गराउँदै हिँडे’, त्यो घटना सम्झिँदै उनी भन्छिन्, ‘अनेरास्ववियु वा कसैले आक्रमण गरे भने साथीहरु भेला पारेर कोठा–कोठा बन्द गरिदिन्थें ।’
विद्यार्थी जीवनकालबाटै राजनीतिमा आफु आँटिली महिलाको रुपमा परिचित उनी सुनाउँछिन । ‘सानैबाट म आँटिली थिएँ र अहिले पनि त्यत्तिकै छु’, संग्रौलाले हटलाइनखबरसँग भनिन् ।
त्यतिबेला महिलाहरु विद्यालय बाहिर नै थिए । तर, तपाँईले पढाइलाई निरन्तरता दिँदै राजनीतिमा सक्रियता कसरी बढाउनुभयो त ? प्रश्न सोधिसक्न नपाउँदै उनी जवाफ फर्काउँछिन, ‘पहिलोपटक म विपिबाट प्रभावित भएँ । कारण मेरो सम्पूर्ण परिवार नै नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो । बुवा–आमा, दाई पनि काठमाडौंमा बसेर राजनीति गर्नुहुन्थ्र्यो । त्यसले मलाई सहयोग गर्यो ।’
१६ बर्षमै बिहे, बिहेपछि पनि मोडिएन राजनीतिक जीवनः
१६ बर्षको उमेरै संग्रौलाको बिबाह भयो । कलेज पढाउने शिक्षकलाई उनले श्रीमानका रुपमा पाइन् । बिहेपछि राजनीतिक जीवन धेरै महिलाको स्थगन हुने वा मोडिने संभावना रहन्छ । अझ त्यो बेला महिलाले राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने समाजिक मान्यता थियो ।
तर, संग्रौलाले बिबाह गरेर श्रीमानको घरमा जाँदा पनि न पढाइ छाडिन न राजनीति । ‘मलाई श्रीमानले एकदमै सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो । र अहिले यहाँ (संघीय संसदको सदस्य) छु ।’
महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस दाङबाट स्ववियू पदाधिकारीसमेत भएकी सांसद संग्रौलाको १६ वर्षको उमेरमा विवाह भयो । एसएससी पास गरेर बसेकी उनले बाबु–आमाको सल्लाह मोरङका एक शिक्षकसँग बिबाह गरिन् ।
किन सानै उमेरमा विहे गर्नु भयो त ? भन्दा उनी थप्छिन्, ‘त्यतिबेला सबैको सानै उमेरमा विवाह हुन्थ्यो । चलन नै त्यस्तै थियो ।’
बिहेपछि पनि उनलाई श्रीमानको पुरै सहयोग रह्यो । ‘बिहेपछि मेरो पढाइलाई असर गरेन । शिक्षित श्रीमान पाउनुको फाइदा नै यही भयो ।’ आफ्नो श्रीमानको कुरा गर्दा र सहयोग पाएको सुनाउँदा संग्रौला फुरुङ्ग हुन्छिन् ।
संग्रौला दम्पतीको जीवन पनि सुखमय रहेको उनको अनुहारको भावले नै देखाँथ्यो । राजनीति गर्ने त्यसमाथि नेतृत् कसरी समय ब्यवस्थापन गर्ने। परिवारलाई कसरी समय मिलाउने भन्ने चिन्ता अन्य राजनीतिज्ञहरुलाई जस्तै उनलाई पनि छ । तर, उनि भन्छिन्, ‘मेरो श्रीमान शिक्षित हुनुहुन्छ नि त …’
बिहेपछि पढाइ सकाएर उनले १५/१६ वर्ष महेन्द्र मोरङ क्याम्पसमा प्राध्यापन गरिन् । ‘कलेज सँगसँगै म राजनीतिमा पनि सक्रिय थिएँ । श्रीमान पनि राजनीति गर्नुहुन्थ्यो । म पनि गर्थे ।’
०४६ सालको आन्दोलनमा घरमा साना छोरी छोडेर होमिएको उनी कहिल्यै बिर्सन सक्दिनन् । आन्दोलनमा जाँदा प्रहरीको अश्रुग्याँस र लाठी पनि भेटाएकी रहिछन् । ‘प्रहरीको कुटाइ खाँदा पनि आन्दोलनमा होमिने जोश जाँगर चलेको देख्दा अहिले छक्क लाग्छ’, उनी भन्छिन् ।
जनयुद्धको डर र कांग्रेसको राजनीति:
५२ सालबाट नेपालमा तत्कालीन नेकपा माओवादीको शसस्त्र युद्ध (जनयुद्ध) सुरु गर्यो । यो सँगै उनको मनमा डरले ड्यांग्रो ठोक्न थाल्यो । कारण– तत्कालीन माओवादीको निशाना तत्कालीन राजसंस्था र त्यसलाई अंगाल्ने राजनीतिक दल । त्यसमाथि कांग्रेसको संसदीय ब्यवस्था माओवादीको मुख्य सत्रु भन्ने घोषित नीति नै थियो ।
साना–साना दुई छोरीका साथमा राजनीतिमा सक्रिय संग्रौलालाई माओवादीले खुबै सताएका रहेछन् । त्यसबेला उनी विराटनगरमा बस्थिन् । माओवादीले घरमा आक्रमण गर्ला भनेर कति दिन रातभर निदाउन नसकेको उनी सम्झिन्छिन् ।
‘माओवादीले आक्रमण गर्ने सूचना आएसँगै प्रहरीले घरमा घेरा हालेर राखेका थिए । राति साना छोरीसँग म एक्लै हुन्थें । कहिलेकाँही श्रीमान पनि घरबाहिर बस्ने गर्नुहुन्थ्यो । बाहिर प्रहरीले घेरा हालिरहेको हुन्थे । माओवादीले आक्रमण गर्छन् भनेर म भित्र रातभर ननिदाइ बस्थें’, उनी भन्छिन् ।
जनयुद्धबाट आक्रान्त बनेकी उनी पुनः बालापनमा फर्किन्छिन् । उनले विद्यार्थी कालमा दाङबाट राजनीति गरेको बताउँछिन् । पढेलेखेको श्रीमान नपरेको भए आफूले पढ्न नपाउने उनको भनाइ छ ।
उनी सानै छँदा विभेद र अन्यायको विषयमा आवाज उठाउने उनकै घरमा कमलरीहरु काम गर्ने बस्थें । उनी भन्छिन्, ‘त्यतिबेला कमलरीको विषय हामीलाई थाहै थिएन । जब हामी ठूलो भयौं त्यतिबेला सबैको घरमा काम गर्ने हुन्थे ।’ जब उनलाई कमलरीको विषयमा थाहा हुँदै गयो तब उनी आफैं कमलरी मुक्तीका लागि आन्दोलनमा होमिइन् ।
नेपालमा विपि पछि अर्को विपि जन्मिदैनन् !
राजनीतिमा लाग्नका लागि विपिबाट प्रभावित भएकी उनी नेपालमा अर्को विपि नदेखेको दाबी गर्छिन् । उनलाई अहिलेको सभापतिको नेतृत्व पनि मन परेको छैन् । उनी भन्छिन्, ‘म स्पष्ट भन्छु, मैले विपिपछि अर्को विपी देखेको छैन् । कुनै पनि पार्टीमा विपी जस्तो नेता जन्मिदैन । विपीले साहित्यको तर्फबाट पनि नेपालको चित्रण गर्न खोज्नु भएको छ ।’
उनले अहिलेका नेताहरुपनि विपीको गुण नदेखेको स्पष्ट पार्छिन् । ‘विपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादको तर्फबाट विपिले त्यस बेला नै सपना देख्नु भएको थियो – हरेक नेपालीको घरमा एउटा बस्ने घर होस्, दुुहुनो गाई होस् । कोही पनि औषधि उपचार बिना मर्नु नपरोस् । भनेपछि आज पनि त नेपालको अवस्था त्यही छ नि त । हरेक नेपालको हातमा न शिक्षा, रोजगार छ न त स्वास्थ्य नै छ । नेपालमा अहिले भिजनरी नेताको खाँचो छ’, उनले भनिन् ।
आफू विपिको अनुयायी भएको बताउँदै उनी भन्छिन्, ‘विपीले द्वारिकादेवि ठकुरानीलाई पहिलो महिला मन्त्री बनाएर दक्षिण एसियाको ढोका खोलिदिनुभयो । हरेक दलभित्र यस्तो सोचको कमी छ ।’
गंगामायाले न्याय पाउनुपर्छ !
कानुनी राज्यमा सबै नेपालीले न्याय पाउनुपर्छ भन्नेमा उनी ढुक्क छिन् तर, गंगामाया जस्ताको समस्या हेर्दा उनलाई त्यो भान कहिल्यै भएन । नन्दप्रसाद अधिकारीले छोराका हत्यारालाई कारबाही हुनुपर्छ भन्दा अनशनकै क्रममा मृत्युवरण गर्न पुगेकोमा उनी दुःखी छिन् ।
‘गंगामायाले न्याय पाउनुपर्छ भन्दै हामीले धेरै नै संघर्ष गर्यौ तर, बिडम्बना गंगामायाका श्रीमानले अनशनकै क्रममा प्राण त्यागे । श्रीमानको लास लिएर पनि उनी अनशनमा बसिन तर, न्याय पाइनन्’, उनी भन्छिन् ।
सरकारले दोषीलाई कारबाही गर्ने भन्दै जुस खुवाएर गंगामायालाई धोका दिएको उनको आरोप छ । डा. संगौला भन्छिन्, ‘यो सरकारले जे कुरामा पनि प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने तर, काम नगर्ने ट्रेन्ड नै बसाल्यो ।’
महिला अधिकारको कुरा !
उनले नेपालमा महिलालाई अधिकार दिन कन्जुस्याइँ गरिएको बताइन् । दिनहुँ महिलामाथि एसिड छ्याप्ने, यौन हिंसा, बलात्कार, हत्या, कुटपिटका घटना बाहिर आइरहँदा पनि महिला मन्त्रीले कुनै कदम चाल्न नसक्नु दुःखद पक्ष भएको उनको गुनासो छ । ‘महिला तथा बालबालिका मन्त्रीले दण्डहिनता अन्त्य गर्न पहल गर्नुपर्ने थियो तर, बिडम्बना त्यो गर्न सक्नु भएन ।’
उनले सरकारमा महिलाको सहभागिता पनि ज्यादै कम भएको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘कार्यकारिणी मन्त्रिपरिषद्मा १२ प्रतिशत मात्र महिला छन् । प्रदेशमा ०.५ प्रतिशत महिला मन्त्री छन् भने मुख्यमन्त्री त एक जनता पनि महिला छैनन् ।’
जागरण अभियान सरकारलाई गाली गर्न होइनः
उनले दोस्रो चरणको जागरण अभियान सरकारलाई गाली गर्न मात्र नभएको जिकिर गरिन् । उनले दोस्रो चरणको जागरण अभियानमा कांग्रेसले नयाँ मुद्धा लिएर आएको बताइन् ।
पहिले संघको क्षेत्रमा केन्द्रित जागरण अभियान अहिले भने ३३० प्रदेश सभाको क्षेत्रमा केन्द्रीत रहेको बताइन् ।
‘पहिलेको मुद्दाहरु राजनीतिक थिए तर, अहिलेको मुद्दा सामाजिक अभियानमा केन्द्रीत छ । स्थानीय स्तरमा राजनीति गर्नेहरु जागरिण अभियानमा खटिएका छन् । समाजमा रहेको शोषण, अज्ञानतालगायतका विषयलाई समेटेर हामीले अभियान चलाएका छौं । यो अभियानमा कसैले कसैलाई गाली गर्ने उदेश्य हामीले दिएका छैनौं ’,उनले भनिन् ।
साथै यो अभियानमा कांग्रेसले चुनाव हारेको कारण पत्ता लगाइएकाले युवालाई आकर्षित गरिने बताइन् । उनले भनिन्, ‘यो चुनाव किन हार्यौै भनेको त युवालाई आकर्षित गरेकै रहेनछौं त कसरी चुनाव जित्नु ? अब कांग्रेसले चुनाव जित्नका लागि १५ प्रतिशत युवाको मत चाहिन्छ ।’
द्वन्द्व पीडित पनि कांग्रेसको पक्षमा !
उनले तत्कालीन माओवादीमा होमिएकाहरु पनि कांग्रेसको पक्षमा आएको दाबी गर्छिन् । ‘माओवादीले जसलाई बन्दुक बोकाए ति पीडिले पनि न्याय पाएनन् । जो सहिद परिवार तीनले पनि न्याय पाएनन् । सरकारमा रहेको पार्टीबाट पनि द्वन्द्व पीडितले न्याय पाएनन्’, उनको गुनासो छ ।
जनयुद्धमा होमिएकाहरु अहिले कांग्रेसलाई विकल्पको रुपमा हेरिरहेको उनको दाबी छ । ‘जागारण अभियानमा द्वन्द्व पीडित र सहिद परिवारलाई घर–घरमा गएर सम्मान गर्ने अभियान चलाएका छौं’, उनले भनिन् ।
चित्त नबुझेको विषयः
दुई तिहाईको सरकारबाट उनी सन्तुष्ट छैनन् । उनले सरकारले सुरक्षा, शुसासन, विकास दिन नसकेकोमा गुनासो छ । ‘रेल र पानीजहाजको कुरा थियो । त्यो पनि विस्तारै आउँछ भनेका छन् आउला’, उनले भनिन्, ‘तर, व्यवस्थापिका संसदको काम भनेको ऐन, कानुन बनाउने हो । तर, विवादित ऐन संविधानको विपरित आएका छन् । मलाई त छक्क लाग्छ ।’
उनले आफूलाई चित्त नबुझेको विषय यसरी बेलिबिस्तार लगाइन्ः
संविधानलाई टेकेर सरकार आएको छ । आजसम्म सभामुख उपसभामुख एउटै पार्टीको छ । बोल्न हामीलाई दिँदै दिँदैन । कानुन आउँछ मिडिया काउन्सिल विधेयकदेखि गुठी, भूमि सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी विधेयक लगायत सबै विधेयक संविधानको विपरित अएका छन् ।
यो चाँही मलाई के लाग्छ भने संविधानमा टेकेर आएको सरकारले संविधानको भावनाको विपरित कानुन ल्याउँछ भने यस्तो कानुनले जनतालाई न्याय गर्छ कि गर्दैन ? यो कुरा मलाई अचम्म लाग्छ । बारबार यो कुराले मलाई एकदमै छुन्छ ।
बाँच्नका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्छौंः गोकर्ण विष्ट
हामीले आज गरेको नीतिगत सुधार र कानूनी व्यवस्थाको परिणाम आउन केही वर्ष लाग्छ । तर, जनतामा आजको गरिएको कामको परिणाम…
खोक्रो राष्ट्रवादको ‘दुन्दुभी’ नबजाउँदा हुन्छ, कोही हच्कनेवाला छैन: गोकुल बाँस्कोटा (अन्तर्वार्ता)
सार्वभौम जनताले चुनेको प्रधानमन्त्रीले कुनै विदेशी नागरिकता लिएर जानुभएको होइन । विदेशबाट अन्य कुनै विषयमा भिडियो कन्फ्रेन्स गरिएको पनि होइन…
नेकपामा सँधैभरी पार्टी एकीकरणको एजेन्डा बनिरहनु हुँदैन् : रेखा शर्मा (अन्तर्वार्ता)
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकी केन्द्रीय सदस्य रेखा शर्मालाई लामोसमय सम्म पार्टी एकीकरणको झमेलमा फसिरहेकोमा चित्त बुझेको छैन् ।